GoldRush EA - Best Forex Who Am si | Ọkachamara advisors | FX ígwè ọrụ na-
GoldRush EA dabeere na volatility breakout. Na Forex ọkachamara Advisor trades site ịtụkwasị rue mgbe iwu na-adịbeghị anya support / eguzogide etoju on kwa ụbọchị timeframe.
Maka nsonaazụ kachasị mma, ana m atụ aro Forex Broka na EET timezone. Ha na-enye kandụl ise zuru oke n'otu ụbọchị n'izu ahia.
GoldRush EA - Atụmatụ
Good ule pụta on data site 2005
Ọ dịghị martingale ma ọ bụ martingale ọcha
Ọ dịghị okporo, ọ dịghị kpochidoro, ọ dịghị scalping
Nyo nke volatility; pụtara-reversion nyo
Trades na-mgbe na-echebe na oge na-akwụsị / nkwụsị-ọnwụ / kwụsị na mmanya mmechi
Ọ dịghị mkpa na-ebuli
Timeframe - M30. Ego: GOLD (XAUUSD). The EA nwere ike ịbụ backtested site Ogwe ma ọ bụ ọ bụla akọrọ.
GoldRush EA - Ngalaba
UseMM_Balance - Bara uru nkwụnye ego ego. Ọ bụrụ na a bara uru e debere (ie dị iche iche si 0), mgbe ahụ trading ọtụtụ na gbakọọ kwa nke ọ bụla UseMM_Balance nke nkwụnye ego. Ọ bụrụ na atọrọ ka 0, mgbe ahụ trading ọtụtụ size bụ ofu na = Ọtụtụ. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na nza= 0.1 na UseMM_Balance = 300, mgbe nkwụnye ego bụ 300, na EA ga-emeghe ihe iji nke 0.1 ọtụtụ, na mgbe nkwụnye ego bụ 600 - 0.2 ọtụtụ, mgbe nkwụnye ego bụ 900 - 0.3 otutu, wdg Nke a oke dị mkpa n'ihi na reinvestment .
EET_offset - EET mmebi nsogbu. Maka ndị na-ere ahịa na EET (GMT + 2winter / GMT + 3summer) timezone nke gosipụtara kandụl ise zuru ezu n'ụbọchị izu ahia (Monday ... ..Friday) setịpụrụ uru a na 0. Maka ndị ọzọ na-agba akwụkwọ ị ga-edozi EET mmebi (-23 ... .23). Dị ka ihe atụ, n'ihi na ore on CET (GMT + 1winter / GMT + 2summer) timezone EET_offset = -1.
TakeProfit% ofPrice - Uru iche na pasent nke ntinye price.
StopLoss% ofPrice - Max stop-ọnwụ na pasent nke ntinye price.
MagicNumber - pụrụ iche ID maka iwu EA.